Booliska Gaalkacyo oo soo qabtay kooxo ka ganacsada maandooriye | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Booliska Gaalkacyo oo soo qabtay kooxo ka ganacsada maandooriye
Booliska Gaalkacyo oo soo qabtay kooxo ka ganacsada maandooriye
Ciidamada booliska magaalada gaalkacyo ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan kooxo muddooyinkii u dambeeyay ay ciidamadu ku raad jogeen, kuwaasi oo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya.
Taliyaha Saldhigga ciidanka Booliiska magaalada Gaalkacyo Dhame Cawil Nuur Rooble ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka uu ahaa mid qorsheysan oo lagu baadi goobayay kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya, waxaana uu intaa ku daray in ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan tiro ka mid ah kooxihi la baadi goobayay.
Taliyaha ayaa sheegey in howlgal ay sameeyeen ciidamada Boolisku ay baaritaano ku hayaan kooxahaasi, islamarkaana talaabo laga qaadi doono.
Ka ganacsiga Maandooriyaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay magaalada Gaalkacyo, waxana talaabadan ay qaadeen ciidamada Boolisku ay horseedeysaa in ay hoos u dhacaan falalka dhiiragelinaya dhibaatooyin ka dhex dhac bulshada dhexdeeda.
Previous articleMidowga Yurub oo sheegay inuu bixiyay Mushaaraadka Ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Next articleGuddoomiye Jawaari “Barlamaannada Afrika waxay isku raaceen wax u qabashada dhallinyarada”